Ii-FAQs-Iris Beauty Co., Ltd.
I-2.Q: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
A:Kuqala, sazise imfuneko yakho malunga nezinto, emva koko siya kunika iingcebiso ngokufanelekileyo kwaye sinikeze ikowuteshini. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe zingathumela iisampuli. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba iodolo yenziwe.
3.Q: Ngaba uyayamkela i-OEM ODM kwaye Ngaba unokwenza uyilo lwethu?
I-4.Q: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
I-5.Q: Kuthekani ngexesha elikhokelayo lokuvelisa ubuninzi?
A: Ngokunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani bomyalelo kunye nexesha lonyaka obeka ngalo iodolo. Ngokuqhelekileyo ingaba yi-25 - 60 iintsuku. Siyifektri kwaye sinomthamo oqinileyo wemveliso, sicebisa ukuba uqale ukubuza kwiinyanga ezimbini ngaphambi komhla ongathanda ukufumana iimveliso kwilizwe lakho.
6.Q:Ithini imimiselo yakho yokuhlawula?
I-7.Q: Indlela yokunxibelelana nathi?
Silapha ukukunceda---nceda uzive ukhululekile ukusithumelela i-imeyile irisbecosmetics@gmail.com.